Baarlamaanka Puntland, oo Ogolaaday Codsi ka yimi M/weyne Deni, oo ku wajahnaa DP WORLD
Puntlandtimes (Garoowe)-Fadhiga 18-aad ee Kalfadhiga 47-aad Golaha Wakiillada Dawladda Puntland oo uu shir-guddoomiyey Guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland oo uu shir guddoominayey guddoomiye Jibriil ayaa waxa lagu horkeenay codsi kaga yimid madaxweynaha.
Kooramka maanta ee golaha wakiilada Puntland waxaa soo xaadiray 49 Mudane, waxaana loo soo gudbiyey codsigii Madaxweynaha Dawladda Puntland Mudane, Siciid Cabdullahi Denni oo ahaa in ay socto dhameystirka heshiiska Puntland iyo P&O Port ( DP-World) Dekadda Boosaaso isla markaana loo daayo Golaha Xukumadda.
Intaas kadib waxaa barlamaanku ay cod u qaadeen ogolaan shaha codsiga madaxweynaha Puntland ee ku aadan xaaladda dekedda Boosaaso iyadoona ay cod gacan-taag ah ku oggolaadeen 38 Mudane, halka ay 11 mudane ka aamuuseen aysanna jirin cid diidey.
Ugu dambayntiina golaha wakiilada Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay maalinta Isniinta 30 Bisha November, 2020 ayaa Golaha Wakiillada Dawladda Puntland yeelan doona kulanka la Xisaabtanka golaha xukumadda.
Waxaan ansaxinay codsigii saciid deni maad iska tidhaahdiin saciid lacag buu afka noo buuxshay isaga usacabumaynaa masuuliyaddi la idinsaaray oo aad u dhaarateen shacabkiina ma waxa ku badalateen khiyaano iyo masuqmasuq maad sharci dejin iyo qaraar ka soo saartaan arinta dekadda iyo isla xisaabtan Baarlamoow waxad indhiihina ku aragten maraakiibta iyo doomaha ay ku xiran waayeen dekedda, waxaad indhihina ku aragten carro badan oo buuxisay dakadda.wlhi an ku dhaarte haddaydaan si sax ah oo cadaalad aydan waxwaliba uwadin, hadhow dhiig kar iyo macaan ba sariirta la jiifanaysan wlhi dambigii iyo xaqii umadda idinku layahd ad ku tumatan.
Kkkkk Parlamaanka Puntland.
Ma marka Deni debeda kasoo laabto ayuun bay shiraan?2🤣
Binti-Girl iyo Imaaraadku waa saaxiiibo is jecel.. intaa awalba waan ogayn.
Mubarik Yusuf: waxaad dhabtii tahay,mid aan dhedig iyo labood midna ahayn oo dayuus ah, baad tahay.
Awalba waa la ogaa in Puntland aysan waligeed yeelan Baarlamaan sidii la rabay u shaqeeya mudadii ay dhisnayd oo dhan.
Waxaa ugo liitay kan hadda jira oo runtii hoos maamulka Deni,ka danbow markii oo keensaday shaqsi la yiraahdo Abwaan oo u shaweeya in uu xoghayn u yahay mudane Deni.
Gaas iyo Deni iyo xildhibaanada mudadaasi joogay waxay sameeyeen oo ku lug lahaayeen in DP World ay lacag laaluush ay ka qaateen si loo saxiixo heshiis ku lidi ah dabaha shacabka Puntland iyo qaranimada Soomaaliya oo dhan.
Heshiiskaasi waa ka sababay in maantay Dakadii Bossaso ay halis ugo jirto in baacaad xiro.
Deni waxa uu maareeye uga dhigay Dadka Bossaso seedigii si loo boobo hantida dadwaynaha reer Puntland.
Marka inta aan runta uyo waxa dhabta ee jira geyigs P aan baanaanka ka soo dhigayn si borobogaandada iyo xayeysiinta maamulka aan ka dhagaysan oo marwalba waxa jira la sheego.
Waxa ugo wacan in aan la isla xisaabtamin waxa weeye ku dhat nidaam beeleed ka Puntland u ah asaaska maamulka iyo maaraynta hay’adaha dowliga ah.
Puntland waxay u baahantahay isbedel dhab ah,oo ka duwan wixii lago socday. 22 kii sano ee musumaasuqa iyo qabyaalada ay ahaayeen wax fadhiidka ka dhigay hab dowladeed kii umaddo filaysay in uu ka hirgalo Puntland si buuxda.
Waa in la helo dad daljirayaal ah oo dhexdhexaad ah uu baara soona bandhiga fadeexada iyo musumaasuqa hareeyey heshiiska DP World ee Dadka Bossaso oo ay galeen Gaas iyo Deni.